Dossier very : Nifanenjana Ravalomanana sy ny AV7 -
AccueilRaharaham-pirenenaDossier very : Nifanenjana Ravalomanana sy ny AV7
15/11/2017 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Manoloana ny fahaverezan’ny antotan-taratasy mikasika ny raharaham-pitsarana, izay nahavoaheloka an-dRavalomanana mandra-pahafatiny, dia niloa-bava omaly ny mpisolovava sady solombavambahoaka manaraka azy, i Hanitra Razafimanantsoa. Nahagaga ihany ny valinteny nentin’ ity mpisolovava ity satria dia olona eo anivon’ny fitsarana ny tenany « tsy misy izany dosie an- dRavalomanana izany, satria dia fitondrana tsy ara-dalàna nisy tamin’izany fotoana izany » hoy izy. Tsiahivina anefa, fa ny maitre Haniitra Razafimanantsoa no mpisolovava ny voampanga tamin’izany fotoana izany, ka raha fitondrana tsy ara-dalàna no nisy inona no mbola nitondrany fiarovana ny voampanga. Raha ny fitsarana tamin’izany fotoana ihany koa no tsy ara-dalàna, angatahana ny mpisolovava Hanitra Razafimanantsoa hitaky ny hamoahana ireo izay nomelohina rehetra nandritra ny fotoam-pitsarana nisian’ny Tetezamita. Izay fihetsika izay ihany no manaporofo fa tsy mitombina ny fitsarana tamin’izany fotoana izany, fa kosa mitombina ny fitsarana raha toa tsy sahy milaza ampahibemaso izany ny maitre Hanitra Razafimanantsoa.
Ho an’ny avy amin’ny Av7 kosa manoloana ny filazana fa tsy mitombina ny fitsarana nisy tamin’ny Tetezamita, dia nilaza ny filohan’ ny fikambanana fa « fanakorontanana io efa fangalarana antotan- taratasy io, ary ho anay Av7 dia efa nisy ny didim-pitsarana izay tsy azo n’iza n’iza lavina tamin’izany fotoana izany ». mametra-panotaniana ihany koa moa ny avy amin’ny Av7 manoloana ny filazana fa tsy mitombina ny fitsarana tamin’izany fotoana izany « Raha ambaran’izy ireo fa tsy mitombina ny raharaham-pitsarana tamin’izany fotoana izany, inona no antony nangalaran’izy ireo ny antotan-taratasy mikasika iny fitsarana iny. Raha tokony ho nandeha tamin’ny faha-13 ny volana novambra teo kosa ny fitsarana mikasika ny fanonerana anay, maninona izy ireo no nanao fanoherana. Samy fitsarana ihany ny resaka eto ». Ho an’ ny Av7 dia fanodinkodinana saim-bahoaka no atao amin’ izao fotoana izao mba ahafahana manodina ny zava-misy ho adihevitra politika hafa mivaona amin’ny tena zava-misy. Ho an’ny avy amin’ny Av7 dia « ampiharo izay voalazan’ny lalàna satria tsy misy olona ambony eto, na ambonin’ny lalàna ».